Ifashoni-iBezzia | IBezzia
Ifashoni Ngokwesiqhelo, yonke into inxulumene nendlela abantu abanxiba ngayo ngalo lonke ixesha, okanye iseti yeendlela kunye nezitayile abantu abazuzayo kweli candelo. Ngesi sizathu, iBezzia ayinakubakho kweli hlabathi, apho kukho izitayile zazo zonke iintlobo kunye neempawu zayo yonke imibala, ke sinethemba lokuzifumana zonke.
Siza kubakho kwakhona ikatala, iindaba zecandelo, siza kulandela iindaba zamagama afanelekileyo eli hlabathi kwaye siza kukubonisa ngemizekelo yezo modeli kufuneka uzilandele kwaye zeziphi ezingalandelwanga.
Okokugqibela, siza kulandela umzekelo wabantu abadumileyo abafumana iimfihlo zendlela yabo yokunxiba kwaye siya kuzama ukukopa iimpahla zabo.
I-raincoat, iqabane lokujongana nemvula yokuqala
por UMaria vazquez yenzayo Usuku olu-1 .
Ukuba kwiveki ephelileyo besithetha ngemikhwa, le yingubo engaphelelwa lixesha ehlala ingahlali ...
Iilokhwe zexesha leMango eyothusayo ngazo
por USusana godoy yenzayo Iintsuku ze5 .
Iilokhwe zonyaka sele zikhukulise esitratweni kwaye ixesha elitsha kunye nesizini ngokwalo sele sele ...
UZara wethula ingqokelela yayo entsha ye Studio, uyifumanele!
por UMaria vazquez yenzayo Iintsuku ze5 .
URianne Van Rompaey, Meadow Walker, uRaquel Zimmerman, uSasha Pivovarova, uKirsten Owen kunye noMarisa Berenson zezinye zeenkwenkwezi ze ...
Thatha ithuba lezaphulelo ezibonakalayo kwindawo ekuthengiswa kuyo iDolores Promesas
Ukuba awukayifumani ivenkile yeDolores Promesas, andazi ukuba ulindele ntoni. Fumanisa ingqokelela kude kube ...
Ukubheja kwimpahla eprintiweyo ebhalwe ngeli xesha lonyaka
por UMaria vazquez yenzayo Iveki e-1 .
Ukuprintwa okutshekishwe kwakhona kuyindlela efanelekileyo yefashoni yelinye ixesha lekwindla-lasebusika. Rhoqo yenza ...
'Yahlula-hlula' ibhulukhwe: Umkhwa olapha wokuhlala
Ukuba siyayicinga, ayisiyiyo enye yezo zinto zisandula ukufika, kodwa ...
Fumanisa izindululo zasebusika ekwindla zikaCinga ngeMu
Ayiloxesha lokuqala sithethile nawe malunga ne-Thinking Mu, inkampani yeefashoni ezinzileyo ezinjongo zayo ikukufaka igalelo ...
I-Ballerinas, isihlangu esintofontofo ukukhawulezisa iintsuku ezinelanga
Abadanisi lolunye uhlobo olufanelekileyo ngesiqingatha sexesha ukugqiba iimpahla zethu. Njengakwii-moccasins, zazo ...
Zonke iintlobo zeebhulukhwe zesikhumba ezibuyela ekuweni
por USusana godoy yenzayo Iiveki ze3 .
Ibhulukhwe yenye yeempahla ezintsha zeenkwenkwezi kwaye siyayazi. Kuyinyani ukuba xa kufikwa kubanda bayatshintsha ...
Iqoqo elitsha le-Intimissimi lingerie: umqhaphu okanye isilika?
por UMaria vazquez yenzayo Iiveki ze3 .
E-Bezzia simema wena namhlanje ukuba ufumane ingqokelela yeengubo zangaphantsi ze-Intimissimi. Ingqokelela ebanzi ...
Zeziphi iimpahla eziza kuseta imeko yokuwa kwaye awazi?
Ikwindla lifikile, nangona kwezinye iindawo kungabonakali ngathi linjalo kuba ilanga liyaqhubeka likhanya ngendlela engazange ibonwe ngaphambili. Kodwa…
Ungayintoni intombazana yaseTumblr
Ukuphononongwa kwefashoni yee-90s
Ukuphononongwa kwefashoni yee-60s
Unxiba njani emtshatweni wosuku
Ukuhamba ngefashoni yee-80s
Imfashini ukusuka kwi-50s, isitayile esihlala sibeka imikhwa
Iindlela zokuhamba ngezithende
Yila ilokhwe yakho
Izihlangu zabafazi ezinenyawo ezinkulu
Ungayisusa njani imikrwelo kwizihlangu zesikhumba
Iilokhwe zestayile ezinesitayile
Iindlela zokwahlula izihlangu zokwenyani zikaGqirha Martens kwii-knockoffs
Izinto ezisetyenziselwa ukwenza izihlangu
Ubungakanani bezihlangu kwihlabathi